Daily News - Page2of7- Knowledge and Update News
မင်္ဂလာဦး ညမှာပဲ သတိပါလစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီးရဲ့ အဖြစ်
အဖြစ် ” မင်္ဂလာ ဦးညရင်ခုန်သံ ” ” အားးးးးးး!!!” အော်သံကြားပေမယ့် ဒါသဘာဝပဲလေဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည် … … ။ မင်္ဂလာဦးညပေးကိုးးးးး အော်သံကြားပြီး သိပ်မကြာလိုက်. . . လူပြိုကြီး Moe Aung အသံနက်ကြီးဖြင့် ” […]
“နင့်စကပ် ကို အပေါ်နည်းနည်း တင်ပေး ရင် ပိုက် ဆံ တစ်သောင်းပေး မယ်” ဆို တဲ့ လူပျိုကြီ
“နင့်စကပ် ကို အပေါ်နည်းနည်း တင်ပေး ရင် ပိုက် ဆံ တစ်သောင်းပေး မယ်” ဆို တဲ့ လူပျိုကြီး ကို ပညာပေး လိုက်တဲ့ ကောင်မလေး… ကားပေါ် မှာ လူပျိူကြီးနဲ့ ကောင်မလေး အတူတူ ဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံး ဝင်းဝင်းလေးကိုမမြင် […]
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ရဲ့အဖြစ်
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ရဲ့အဖြစ် ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ရဲ့အဖြစ် ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် […]
စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ….ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါ အားလုံးအဆင်းပြေသွားပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်ဟာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေးအဘက်ဘက်မှာ ချို့ယွင်းလာနေပြီလား။ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲဖြစ်နေလား သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ဘဝမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီလား စိတ်မပူပါနဲ့ မဟာသမယသုတ်ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုသာ ယုံကြည်လေးနက်စွာ ပူဇော် လိုက်ပါ။ မဟာသမယသုတ်ပ ရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုစ ပူဇော်ကာစမှာ အလွတ်ရစရာမလိုပါဘူး စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးပူဇော်တတ်ရင်ပဲ ရနေပါပြီ […]
(၁) အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါတယ်။(၂)အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ (၃) အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး တံမြက်စည်း လာလှည်းသွားရင် ဝင်မယ့်လာဘ် မဝင်တော့ပါဘူး။ သူ့အိမ်‌ဝက […]
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆေးရုံမှာ ရောဂါရင့်နေပြီး မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်ရင် ကျေနပ်ပါပြီ ဆိုတဲ့ လူနာတစ်ဦးကိုAAC မှ ပြည်တွင်းရောက်စေရန် အစစအရာရာကူညီပေးနိင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လှကြည်(ပလောင်တိုင်းရင်းသူ)ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆွေမျိုးမရှိ…မာန်ကင်းရပ်ကွက်ကွန်ဟယ်ကျေးရွာနမ့်ဆန်မြို့နယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဘန်ကောက်မြို့ မင်ဘူရီမြို့နယ်မှ ပရဟိတလူငယ်များနှင့် AAC ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ AAC မှ လူနာ၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ဇာတိရပ်ရွာပြန်ရောက်စေရေး ဘတ်ငွေ တစ်သောင်း ပါလှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။ […]